Dalka Angola oo xabsiga dhigay Somaali badan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dalka Angola oo dhawaanahan ay u ganacsi tegayeen dhallinyaro badan Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray ilaa 20 qof oo Soomaali ah.
Maxamed-deeq Dhiblaawe oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Angola ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la xiray qaarkood loo heysto inay sharci darro ku joogeen dalka, halka kuwa kale lagu soo eedeeyay ganacsi sharci darro ah.
Wuxuu tilmaamay in guddiga jaaliyadda ay booqdeen dadka xiran, ayna dadaal ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen caddaalad.
Maxamed-deeq ayaa xusay in waddanka Angola aysan safaarad ku laheyn dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay ku nool yihiin Soomaali badan oo ganacsato ah.
Wuxuu carrabaabay in jaaliyad ahaan ay ku dadaalaan sidii Soomaalida ku cusub dalka ay ugu caawin lahaayeen dal ku-joogga si aysan dhibaato ugula kulmin laamaha ammaanka.
Dalka Angola ayaa ka mid dalka dhaca koonfruta Qaaradda Afrika, waxaana dhanka koonfureed ka xiga dalka Namibia, dhanka woqooyina waxaa ka xiga Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Congo, halka dhanka bari uu ka xigo dalka Zambia.
Dhalinyarada Soomaalida ah ayaa weli ku qulqulaya dalka Angola, iyadoo ay dalka usoo saaraan shirkado ay leeyihiin Mukhalsiin, waxaana qofkiiba marka la joogo Muqdisho dalka Angola lagu geeyaa lacaga dhan $6000 (Lix Kun Dollar) oo la dhiibayo marka qofka la diray kazoo hadlo dalkaas.
Cabdi Waal laga sheegay Guriceel